Izindaba - Ungayikhetha Kanjani Igedlela Likagesi?
Ungayikhetha Kanjani Igedlela Likagesi?
Iketela likagesi livame esetshenzisiwe ezimpilweni zethu, kufaka phakathi ekhaya noma ehhotela. Lapho sifuna amanzi ashisayo, iketela likagesi lingahlangabezana nezidingo zethu, kepha amanye amaketela kagesi angajwayelekile angasilethela ingozi, ngakho-ke lapho sibhekene nemikhiqizo ehlukahlukene yeketela likagesi emakethe, yini okufanele siyenze? Kanjanisingakhetha kuhle iketela likagesi?
Ngokuvamile bheka izinto ezingaphakathi nezinto zangaphandle, okwangaphakathi kubaluleke kakhulu ngoba kuthintana ngqo namanzi. Lapho ukhetha iketela likagesi, kufanele ubheke ukuthi ngabe ithangi langaphakathi line-SUS304 uphawu okuyi Insimbi engagqwali engu-304, emelana namazinga okushisa aphakeme futhi inokuqina okuhle ukuvikela impilo yabantu. Amaketela kagesi we-AOLGA enziwe ngekhwalithi ephezuluSUS304 noma SUSInsimbi engagqwali engu-316 ukuqinisekisa ukuphepha komkhiqizo nokuqina.
Ngaphezu kwalokho, impahla yangaphandle yeketela likagesi nayo ibaluleke kakhulu. Njengamanje, amaketela amaningi kagesi asemakethe enziwe ngamapulasitiki asebenza ngezinga lokuphepha nobumba, futhi awanalo iphunga elikhethekile. Kepha kukhona namabhizinisi ngamanye ukuze kuncishiswe izindleko. Uma isetshenziswa isikhathi eside, kuzokhishwa izinto ezinobungozi, ezizobeka engoziniyethu impilo.
Lapho uthenga iketela likagesi, ngaphezu kokubheka ukuthi ukubukeka kuyenelisa noma akulindelekile, kufanele futhi kukalwe kusuka kwinqubo yokukhiqiza, kufaka phakathi ubushelelezi bepulasitiki yangaphandle yeketela likagesi ukubona ukuthi ipulasitiki neketela lensimbi engagqwali kuyalingana yini, nokuthi ungqimba lwangaphandle lweplastiki luyaklwebheka yini. . Imikhiqizo emihle iyabonakala enqubeni yokukhiqiza. Iketela likagesi le-AOLGA livela kubuciko obunamandla bamazwe omhlaba, futhi ubungcweti obukhiqizwayo bomkhiqizo bungabongwa ngokubukeka okulula nokomkhathi.
Khetha ngomsebenzi wokushisa onqunyelwe
Khetha ugesi iketelas ngomsebenzi wokulawula umkhawulo wokushisa okuyi ingaqeda ngokuzenzakalela amandla ngemuva kokubiliswa kwamanzi. Iningi wamaketela kagesi emakethe sebenzisa imikhawulo yokushisa.
Hlola ilogo yomkhiqizo nencazelo ngokucophelela. Izinga libeka ukuthi uphawu lomkhiqizo kufanele luphelele, kufaka phakathi: igama lenkampani, ikheli, imodeli, imininingwane (njengamandla), uphawu lokuhweba, imingcele yamandla kagesi, imingcele yamandla, izimpawu zohlobo lokuphakelwa kwamandla, njll .; kufanele kube nokuvinjelwa kwezixwayiso zokusebenzisa kabi, izindlela zokuhlanza ezinemininingwane, njll.
Amaketela kagesi kufanele athengwe ngokuya ngemikhuba yokusebenzisa kanye nezidingo zangempela. Umthamo wamaketela kagesi okwamanje emakethe uphakathi kuka-0.6L no-1.8L. Imizi yabantu ababili kuya kwabathathu bangakhetha amaketela kagesi angaba ngu-1.2L no-1000W; Abantu aba-4 kuye kwabangu-5 bangakhetha iketela likagesi elingu-1.8L, 1800W.
Langaphambilini Ungasisebenzisa kanjani ngendlela efanele i-Glass Electronic Weight Scale CW275
Olandelayo: Izinhlelo zeBeijing Zokuthola Izindlu Zasemakhaya Ezilinganiswe Ngezinkanyezi Eminyakeni Eyisihlanu